Dangalooyin Kala Jira! | isbeddel
← Book Review: No More Lies About Africa
The land of Punt beyond loss and indignity – Africa’s stagnation and its evolution →
Dangalooyin Kala Jira!
Wq. Maxamed Baashe X. Xasan April 01, 2011
Sida ay caadadu tahay inta badan dangalooyinku ma heshiiyaan oo waxa ay isu eegaan macaamil ahaan sida “bisadda iyo jiirka” oo kale. Si haddaba ninka ay u dhexeen uga badbaado heshiis la’aantooda, ayaa waxa la weriyey sheeko tilmaanta in beri nin isugu yeedhay marwooyinkiisii, isaga oo doonaya inuu jawaab u helo su’aal uu ka khatoobey soo noqnoqodkeeda oo marwo kasta gaarkeeda ugu sakaaro tuurto halgaad ahaan oo ah tooda uu ugu jecel yahay! Wax la yidhi markii ay u yimaaddeen ayuu ku yidhi: “ bal sii wada jeesta, maanta waxa aan idiin sheegi doonaa tiinna aan ugu jecelahay”. Shardi buu se taas ku xidhay oo waxa uu marwooyinkiisa ku yidhi: “ tiinna aan taabto ayaan ugu jeclahay, hase yeeshee waxa shuruud ah in aanay arrintaasi maradeeda dhaafin oo nafteeda mooyaane aanay cid kale u sheegin”! Sidii bay yeeleenoo, marwooyinkii dhabarka ayay Xaajigii tuseen. Isna isma uu lurine, marwo kasta dhabarkuu ka taabtay, mid walbaana waxa ay cindigeeda gelisey inuu iyada jecel yahay, isna ugu dhan! Madaxda Soomaalida ee maanta ayaa lagu tilmaami karaa in ay ka dhigan yihiin haweenkaas la wada qabo ee isu dangalooyinka ah marka la eego xafiiltankooda iyo kala higgoodkooda, iyo haddana u wada heellanaantooda dabuubta iyo doocda beesha caalamka! Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabbilsan arrimaha Soomaalida, Md. Augustine Mahiga, dhowaan buu safar ugu kala dab qaaday Hargeysa, Garoowe, Muqdisho.
U qaybsanaha arrimaha Soomaalida ee UK, Matt Baugh, ayaa isna maalmo ka dib jidkaas Mr. Mahiga qaaday kaga daba libdhay. Maamulka Jamhuuriyadda Somaliland, maamul goboleedka Puntland iyo xukuumadda kmg ahiba, qaddiifado cas bay booqashooyinkaas u gogleen, ugu dhowaanna, Mahiga iyo Baugh, wax isku mid ah ayay madaxda Soomaalida u sheegeen. Mid u guuxa iyo mid ka qaws adaygaba, waxa madaxda Soomaalida loo sheegaa (Beesha Caalamka): Isu soo dhowaantooda, ka wada shaqaynta amniga (la dagaallanka argagixisada iyo budhcad-badeedda), dhiirrigelinta maamul goboleedyada, dastuurka qabyada ah iyo ka soo qaybgalka shirarka beesha caalamku ay Soomaalida u golayso, sida ka hadda Nairobi laga naadinayo ee loogu gogol xaadhayo hirgelinta maamul goboleedyada xaafadaysan! Doqonniimadu waa in iyagu (madaxda Soomaalidu), haba yaraato’e, aanay hindisi karin in ay hidiyaan ragannimo ay isugu yimaaddaan oo kaga wada hadlaan danaha ma-dhaafaanka ah ee dhexdooda “haadda iyo haanraawuhu” isugu habar-wacanayaan ee ku fadhayaan iyo in ay ku kashifnaadaan in ay ku heshiin kari waayeen in ay ka wada shaqeeyaan oo iska kaashadaan inta ay isla oggolaan karaan.
Way og yihiin taas oo kama dhoy la’ ee hawraartii “Sula iyo Xaaraama-cune” waraabaha laga reebay baa meesha taalla: “Waa taan ka miciin liitaa ragga qarniga 21aad”! Waxa la yidhi: “ Maxaad waraabow hadalkaas uga jeeddaa”? Kuye waraabihii: “Ragga xilligaas noolaan doonaa tobankooda nin ceesaan ceel ku dhacday kama soo saari doonaan; talo, tusmo iyo tawfiiq la’aantooda darteed”! Soomaalidaa hore u tidhi: “Waysha gawrac dibigu ha ku quustee”!
Sidii waagii gumaystayaasha Reer Yurub ay Afrika u qabsanayeen ee ay u kala hororsan jireen qabaa’ilkii Afrikaanka ee aan dawladaha lahayn, si u eg ayaa maantana Soomaalida loola dhaqmayaa. Indhaheenna oo shaahid ah miyaynaan ku hayn in jilib ama xaafad kasta loo samaynayo waxan loogu yeedhayo “maamul goboleedyada” mode-raaca noqday ee sida indhaha la’ loogu qubanayo! Waxa la wadaa miyaanay u ekayn in beesha caalamku doonayso in ay Soomaalida qoys qoys uga muraadsato sidii qarnigii 19aad. Soomaalidii horaa tidhi: “Lax waliba shillalkay is dhigtaa lagu qalaa”! “Iliilaha Jabuutaan lahaa aad yar sii mariye Addis Ababa gee baan lahaa adhaxda jiilaale Enefdhii (NFD) ha daaqdaan lahaa kaynta ayda ahe Immikana aroor gocondhalay awr la mirataaye!” Axmed Ismaaciil Diiriye (Qaasim) Ma hadhin hadal lays yidhaahdaa! Maxamed Baashe X. Xasan E-Mail: mohamedbashe@hotmail.com
Posted by Warfaa on Abriil 3, 2011 in Uncategorized